Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ipulatifomu entsha yolwazi lwezenhlalo eyethulwe yiDiem
I-Diem, enye indlela entsha yokuxhumana nomphakathi, yethula ukudala izikhala zokuxhumana zedijithali zabesifazane nabantu abangahambisani kanambambili ukuxhuma kumaphoyinti enzalo afanayo, ukubhekana nokuhlangenwe nakho okungekuhle abavame ukuhlangabezana nakho kumanethiwekhi okuxhumana asesikhundleni. Ubuchwepheshe beDiem bufaka ukuxhumana komphakathi nokwabelana ngolwazi okuyiqiniso, sisuka kokuhlelweyo, okuqukethwe okwenziwayo esikulungele ukuhlanganyela nakho emithonjeni yezokuxhumana kanye nokuqondiswa kokulingana, okuhlangenwe nakho komuntu siqu lapho ulwazi luyindlela yokugcina yemali yezenhlalo.
I-Diem ibilokhu ikwi-beta kusukela ngoJanuwari 2021 futhi yaqoqa uhlu lokulinda lwabantu abangaphezu kuka-20,000. Ngaphambi kokukhishwa kwayo esidlangalaleni, iDiem ibhekele ngokucophelela ngaphezulu kwe-100 + "Abasunguli Bokusungula" ukuze babelane ngamava abo kanye nemininingwane efanelekayo nemiphakathi efanele, enentshisekelo ngaphakathi kwepulatifomu ngamafomethi wokuvumelanisa nokuvumelanisa. Abantu baseDiem bazokwazi ukuthola Ababungazi abavela kuzizinda ezahlukahlukene njengabeluleki bezezimali, osomabhizinisi kanye nama-OBGYN. Ababungazi babandakanya nesigaba sabadali abahola phambili, osomabhizinisi kanye nabaholi bemicabango embonini kubandakanya uKirsty Godso, Sabia Wade, Lauren Maillian, noJaclyn Johnson, bonke ababuye bajoyine iBhodi Elilulekayo yenkampani ukubumba enye indawo yesikhulumi abafuna ukuhlanganyela kuyo UJohnson uyaba, "Ngijabule kakhulu ukusingatha nokutshala imali kuDiem, njengoba ngakhe ibhizinisi elisebenza ngabesifazane ngiyasiqonda isidingo semiphakathi ebonakalayo ukuze abantu baxhumane nabanye kanye nochwepheshe endaweni eyenzelwe bona."
Omunye wemigomo eyinhloko kaDiem ukuthi ungakhi ubuchwepheshe obungadingekile futhi bube umlutha, ngoba ikusasa lezokuxhumana alikho ngokuhlanganisa izinhlamvu zamehlo ngokwabelana ngokuhlanganyela. Imayelana nokwakha amapulatifomu anamamodeli wokuthola imali nawo azuzisa abantu abanikela. Ngokuzayo, iDiem ihlela ukusungula ubuchwepheshe obudala, obunezinhlangothi ezimbili bokuxhumana nomphakathi kanye nobuchwepheshe be-harness obutholakala kumageyimu naku-AR / VR ukuhlakulela imiphakathi yenhlalo, enezinhlangothi ezintathu.
UMaitree Mervana Parekh, uMtshali-zimali e-Acrew, uyachaza, ”Umphakathi ushayela izinto zabantu, futhi ubuchwepheshe bukhombise ikhono labo lokuba ngumthombo onamandla wokukhuthaza lokhu. Kodwa-ke, ubuchwepheshe obubeka phambili ukubandakanywa kanye nokuba nethemba akubanga phambili. Kungakho ngijabule ngeDiem. Kuphoqa imingcele ye "social network" futhi kuklanywa ngempela ukucwilisa, okuhlangenwe nakho komphakathi kusuka phansi okwenza amalungu ayo akwazi ukuxhuma, ukushintshisana ngolwazi, futhi achume ngendlela ehlose futhi ebandakanya bonke abantu. "
Sonke siyazi ukuthi imithombo yezokuxhumana inethonya elikhulu endleleni esiphila ngayo, esisebenza ngayo futhi sixhumana ngayo, kepha-ke, amapulatifomu anamuhla aphezulu onke aklanywe ngamadoda. Lokho kuvame ukusho ukuthi izinkampani zemidiya yezenhlalo zihluleka ukwenza izinqubomgomo eziyingozi nezobulili, zishiya isikhala esincane sabantu besifazane nabangewona abambalwa ukuba babe khona emhlabeni obonakalayo. Isazi somphakathi, u-Abadesi Osunsade, uthi, “Njengowesifazane, izinkundla zokuxhumana ezihlonishwayo seziqalile ukuzizwa zixhashazwa, zisikhuthaza ukuba sibe sengozini ezindaweni zomphakathi ngenxa yokuzibandakanya. I-Diem imayelana nomphakathi nokuxhumana ngaphandle kwe-ajenda efihliwe. ”
I-Diem iyakhishelwa emphakathini kulo lonke u-Okthoba 2021. Iqembu elizinze eNew York yinkampani yephothifoliyo yakwaTechstars NYC '20, exhaswe ngama- $ 900,000 ekuxhasweni kwemali ngaphambi kwembewu ngokubamba iqhaza kweXfactor Ventures, Acrew nezingelosi ezihola phambili njengomsunguli weDala & Hlakulela , UJaclyn Johnson no-Discord Executive, u-Amber Atherton.